“ဇီးရိုး” ဖြစ်သွားတဲ့ “သုည” တစ်လုံးဟာ “တစ်” ဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးတယ် – နိုးဆက် နေ့ | PoemsCorner
“ဇီးရိုး” ဖြစ်သွားတဲ့ “သုည” တစ်လုံးဟာ “တစ်” ဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးတယ် – နိုးဆက် နေ့
In: ကဗျာ Posted By: 13th Date: Nov 30, 2012
Leave comment 16 Comments & 427 views
ကိုနိုးဆက်နေ့ရေ .. ကဗျာဆိုတာ ကိုယ့်ရင်ခံစားမှုကနေ ဖြစ်တည်လာတာပါနော် .. ညီမလည်း ကဗျာတင်ရတာ ရှက်မိပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုဝေဖန်အားပေးကြတဲ့ အစ်ကို အစ်မ တွေကြောင့်သာ ဆက်ပြီးတင်ဖြစ်နေတာပါရှင့် .. ကိုနိုးဆက်နေ့ရဲ့ကဗျာတွေကို အမြဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ် .. အခုလိုသာ မတင်တော့ဘူးဆိုရင် ကဗျာမရေးဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် ကျန်တဲ့ အားပေးသူကိုကိုမမများကို လျစ်လျူရှုရာရောက်မယ်ထင်မိပါတယ် .. ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ အားပေးနေတဲ့သူရှိတာကို သိစေချင်လို့ပါရှင်..
By: maypyo22889 at Nov 30, 2012
ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်ဗျာ…ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်.။ ကျွန်တော့ရင်မှာ တင်ထားတဲ့ မှတ်ကျောက် ကဗျာတွေကြားထဲမှာ ကိုယ့်ကဗျာ ကိုရှက်နေတာမျိုး မဖြစ်စေချင်လို့ပါ..
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် မမေပျို..။ အားဆေးတွေ အများကြီးတိုက်ခဲ့လို့ပါဘဲ..။ ကျွန်တော်ကြိုးစားရဦးမှာတွေ အများကြီးရှိနေသေးလို့ပါ..။ ထာဝရနှုတ်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူး..။
By: 13th at Nov 30, 2012
မမေပျို ပြောတာဟုတ်ပါတယ် ကိုနိုးဆက်နေ့ကျွန်တော် ဝေဟင် လည်း ကဗျာကိုချစ်ပေမဲ့
ကဗျာကောင်းကောင်းမရးတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ဒီမှာတင်မိတာ 14 ပုဒ်တောင်ရှိသွားပြီ။ကိုနိုးဆက်ကဗျာတွေကို
ကျွန်တော်ဖတ်ရပါတယ်။ကိုနီုးဆက် က သုံညဆိုရင် ကျွန်တော်က လက်ဝဲဘက်က အနှုတ်ပြနေတဲ့ သူပါ။
By: soewaihin at Nov 30, 2012
မင်းရဲ့ သေတမ်းစာနဲ့တူတဲ့ ဒီကဗျာမှာ ငါ့နာမည်ကိုမထည့်တာ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ ..
ငါ့ရဲ့ Poemscorner password မေ့သွားတယ်ကွာ.. အကောင့်အသစ်လုပ်မလို့ စဉ်းစားနေတဲ့ငါ့ကို မင်းကဗျာက သတ်လိုက်သလိုဘဲ.။ ငါ့ကဗျာတွေ မင်းဖတ်ဘူးတယ်ညီလေး…ခု poemscorner မှာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်. မင်းဖတ်လိုက်..ပြီးရင် ငါကိုယ့်ဘာကိုယ်သတ်သေရမလား ပြောကွာ
By: နိုင်တင်း at Nov 30, 2012
ဘယ်လို စဉ်းစား စဉ်းစား နားကိုမလည်ဘူးကွာ….
ဟေ့ကောင် – မင်းကလေးလိုလို အရူးလိုလို မလုပ်စမ်းနဲ့…. ထပ်ပြောမယ်….
မင်းအရူးလိုလို အရူးလိုလို မလုပ်စမ်းနဲ့
ငါ အကိုကြီးလို ပြောချင်တာ မပြောတတ်လို့ကွာ…..
Congratulations ကွာ …..ဆက်လုပ်….ဆက်လုပ်…မင်းဘာမင်း မှန်တယ်ထင်ရင်
By: ကွန်ထရာအို at Nov 30, 2012
sat pe top loat par ako yae …
By: thulattyar at Nov 30, 2012
poems tway tin Dar shat sa yar kaung de loh Myin de,,hote lar?
Poems tway yae Dar shat sa yar kaung loh lar?
Ei kaayann laee sarr nay tar.
Ei ka r kya nay Dar.
Bar phyit lohelo htin ya tar le hin?
By: ei lay at Nov 30, 2012
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ မအိလေးရယ် … တကယ်ပြောတာပါ…
တောင်းပန်ပါတယ် ကိုကြီး နဲ့ ကွန်ထရာ……
ကျွန်တော်မရင့်ကျက်သေးလို့ သူများကဗျာတွေ ဖတ်မိပြီး အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ခံစားရလို့ ကျွန်တော် ရှက်မိတာပါ..။ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါဘူးခင်ဗျာ..။ ကျွန်တော်မှားသွားတာပါ..။ အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်…. မမေပျိူကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်.ဗျာ….
ကိုနိုးဆက်နေ့ရေ တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးရှင့် အားပေးနေတဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေအများကြီးပဲဆိုတာ လက်တွေ့မြင်ပါတယ်နော် ကဲ ကဗျာဆက်ရေးကြရအောင်ရှင် ရင်တွင်းခံစားမှုတွေကို မျှဝေရင်းပေါ့
By: မေပျို at Nov 30, 2012
Warmly welcome par.
A yann sate nyit nay loh phyit hmar par.
Sate Chan tar aung nay naw.
Sate dat ma kya ne,ti lar?
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ကျေးဇူးကို နားလည်တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျာ…..
အမတို့ ကျေးဇူးတွေ ကျွန်တော့အပေါ် အရမ်းများသွားပြီ..ဗျ..။
အခု..ကျွန်တော် အဲဒီကဗျာအတွက်ဘဲ ပိုရှက်တယ်..ဟီးဟီး
Yee p pop.
ကဗျာတစ်ပုဒ် တင်လိုက်ပြီခင်ဗျာ….ရယ်စရာပါဘဲ….ဒီနေ့ ကဗျာမရေးဘူးလို့ လုပ်တယ် ပြီးတော့ မနေနိုင်ဘူး…တစ်ပုဒ်ချရေးလိုက်မိတယ်…။
အခုလို ကဗျာပြန်ရေးတာ ဝမ်းသာတယ်
A yann lane mar de.
ကဗျာရှင်က ထပ်မရေးတော့ဘူးတော့ ပြောတာပဲ..။
ဒီတစ်ပုဒ်ရေးပြီးရင် နောက်ထပ်ရေးမယ့်တစ်ပုဒ်က နောက်ဆုံးရေးခြင်းပဲ ဆိုပြီးများ
ဒီတပုဒ်ပီး နောက်တစ်ပုဒ် နောက်တစ်ပုဒ်နဲ့ ဆက်ဆက် ရေးဖြစ်နေရော့သလား ကဗျာဆရာကြီးရယ် 🙂
By: noble at Dec 25, 2012